Maxaa Ka Jira In Meles Uu Xanuunsan Yahay??? | Africa's Moment
Maxaa Ka Jira In Meles Uu Xanuunsan Yahay???
Ma dhabaa in Meles Zanawi waxa looga qaban waayay Isbitaalka Brussels (Warbixin).
24.July.2012.Moment Media Group.Waxaa sii xumaanaya Xaalada Caafimaad Ra’iisul Wasaaraha Dalka Itoobiya Meles Zanawi oo dhawaan loo qaaday Isbitaal ku yaala Magaalada Brussels, wuxuuna ku jiraa xaalad Qatar ah sida ay tilmaamayaan warar kala duwan oo na soo gaaraya.
Sida wararku sheegayaan Waxaa lagu soo waramayaa in loo qaadayo Ra’iisul wasaaraha Dalka Itoobiya Meles Zanawi Isbitaal ku yaala Magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, kadib markii xaaladiisa ay hagaagi waysay, isagoo ku jiray dhowrkii Cesho ee la soo dhaafay Isbitaalka Brussels.
Dhinaca kale waxaa jira wali muran iyo is qabqabsi ka taagan Xaalada Caafimaad ee Meles Zanawi iyadoo dadka shacabka ah ee Itoobiyaanku ay si aad ah u hadal hayaan inuu Xanuunka Zanawi yahay mid roon iyo inuu yahay mid halis ah.
Sidoo kale waxay wararku intaasi ku darayaan in ku xigeenkii Zanawi lagu dhawaaqo inuu howsha sii wado, halka warar kale ay sheegayaan in Xaaskiisa xilka si KMG-nimo ah loogu sii magacaabo.
Ugu danbeyntii Ra’iisul Wasaaraha Dalka Itoobiya Meles Zanawi oo hadda u muuqda mid koomo sii galaya miirkiisuna sii daboolmayo marka loo eego xaaladiisa nololeed ayaa qeyb ka ahaa Xasuuqii shacabka Soomaaliyeed kala kulmeen ciidamada Itoobiya ee Sanadkii 2006-dii dabayaaqadeeda soo galay wadanka Soomaaliya, ilaa iyo haddana ku jira dhulka Soomaaliya.
16 July, 2012 02: – Warar laga soo xigtay Saxaafada reer galbeedka ayaa tilmaamaya in Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Meles Zenawi uu ka soo dhex muuqan waayay shirka madaxda ururka Midowga Afrika uga socda Addis Ababa, iyadoo ay ilo wareedyo hoose sheegayaan inuu aad u xanuunsan yahay.
Xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa ayaa waxaa shalay oo Axada ahayd uu shir uga furmay in ka badan 40-madaxweyne oo ka socda dalalka Afrika, kuwaasoo kaga hadlayo shirkooda xiisadaha dagaal ee qaaradda ka jira, kuna doortay hoggaamiye cusub oo uu ururku yeesho.
Meles Zenawi oo la filayay inuu Sabtidii lasoo dhaafay furo shir looga hadli lahaa iskaashiga iyo horumarinta dalalka Afrika ayaa ka qaybgalin shirkaas. Laakiinse madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa furay shirka isagoo sheegay in Meles uusan xaalado caafimaad awgood uga soo qaybgalayn shirka.
Telefishinka dalka Ethiopia ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Zenawi ay wanaagsan tahay, basle shabakad ay mucaaradku leeyihiin ayaa qortay in Meles laga daweynayo xanuun daran oo uu qabo.
Xukuumada dalkaasi weli kama aysan hadlin arrinta, iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo Meles Zenawi uu ka baaqdo shirka Midowga Afrika tan iyo sannadkii 1991-kii oo xukuumaddii Col. Mingiste Haile Mariam laga tuuray xukunka.
Ra’iisul wasaraha Mr. Zenawi ayaan sidoo kale ka qaybgalin shir baarlamaanka Ethiopia uu yeeshay toddobadkii hore, kaasoo lagu waday inuu ka jeediyo hadal ku saabsan miisaaniyadda dalkaas.
Lama sheegin halka uu ku sugan yahay ra’iisul wasaaraha dalkaasi, wuxuuna horay u sheegay inuu xilka ka dagayo marka la gaarao sannadka 2015, kaddib markii uu ku guuleysatay doorashadii dalkaas ka dhacday sannadkii 2010.
← Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Sharif Sh. Axmed ayaa galabta la kulmay Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mudane Malez Zenaw
Ethiopian Opposition Group Reported Melez Zenawi May Have Died In A European Hospital →